Somaliland.Org oo furtay Bogga Akhristaha | Somaliland.Org Blog
← Al Shabaab Oo u Jawaabtay Somaliland
Haddii aad account samaysatay Magacaaga ku qor →
Somaliland.Org oo furtay Bogga Akhristaha
Posted on November 29, 2008 by unregistered	Somaliland.Org waxay idiin diyaarisay bog aad ku daabici karto afkaartaada (Opinion) si fudud kadib marka aad samaysato muftaax adiga kuu gaar ah, goobtaad joogto iyo goorta aad doontaba waxaad ku soo qori kartaa maqaaladaada, hadday yihiin warar iyo haddii ay yihiin afkaartaada gaarka ah ee aad la wadaagayso akhristeyaasha. Haddaba samaysto muftaax (account) si aad shacbiga weynaha ku hadla afka Soomaaliga aad ula wadaagto aragtiyadaada.
Maxaan u baahanahay?
Waa inaad lahaataa email account, kaas oo laguugu soo diri doonto muftaaxa haddii uu kaa lumo.
Kadib sideen u samaystaa account?
Waxaad riixdaa link-ka ka muuqda dhinaca midig ee ay ku qorantahay Register. Mar qudha ayaad u baahantahay inaad is register garayso. Waxaad ku qortaa Username-ka iyo Email-kaaga (Fadlan hubi in emailkaagu sax yahay), kadibna riix badhanka Register.
Talo Muhiim Ah – Inportant advice
Username-kaagu ha noqdo farta yaryar oo aan wax space ahi ku dhex jirin. Haddii aad isu register-garayso cali8000, kuma soo gali kartid CALI8000 - faraqa u dhexeeyaana waa xuruufta oo marka dambe waawayn (uppercase), systemku kuuma oggolaandoono inaad isweydaariso. Haddii aad khaldantay oo aad doonayso inaad markale is register garayso fadlan email u soo dir blog@somaliland.org. Space ha ku darin username-kaaga, systemku wuu kuu oggolyahay ha yeeshee way kugu adkaandoontaa inaad xusuusato.
Please make sure your username is composed of lower case letter and numbers without spaces, this will help you remember your username in the future.
Gal email account-kaaga halkaas oo aad ka heli doonto username-ka aad samaysatay iyo password kuna soo noqo Boggan. Dhinaca midig waxa aad ka arki kartaa link-ka Login. Riix Login ama raac link-kan:
Ku qor Username-ka iyo password-ka si aad u gasho accountka cusub ee Bogga Akhristaha. Kadib waxa aad buuxisa magacaaga First name iyo Last name, waxana muhiim ah in E-mail kuna uu halkaas ku jiro. Macluumaadka kale waad buuxin kartaa haddii aad doonto. Si magaca iyo macluumaadka kaleba aad u sajisho (kaysido – to save), fadlan riix badhanka ka muuqda bogga dhinaciisa hoose ee ay ku qorantahay Update Profile
Marka aad intaa samayso account-kaaga waan kuu furi doona si aad qoraalada ugu soo diri karto. Haddii aad wax su’aal ah hayso waxaad admin-ka uga tagi kartaa comment (you must be signed in to your account to leave a comment).
Waxa hore aan u qornay qoraal aan ku tilmaamayno khaladaadka qoraalada naloo soo diro ku jira. Fadlan akhriso iskuna day inaad fahamto Qoraalada Iyo Khaladaadka Madbiciga Ah
Haddii aad is register-garaysay fadlan magacaaga saxa ay ku dar Profile-kaaga. Riix halkan: Profile
This entry was posted in bogga akhristaha. Bookmark the permalink.	← Al Shabaab Oo u Jawaabtay Somaliland